Keeniyaa: Aanga&apos;oonni uffata dambii fudhachuuf jecha reeffa qotanii baasan - BBC News Afaan Oromoo
Keeniyaa: Aanga&apos;oonni uffata dambii fudhachuuf jecha reeffa qotanii baasan
Qondaaltoonni motummaa Keeniyaa Lixaatti erga nama du&apos;e tokko uffata dambii waliin awwaalanii booda, uffaticha irraa baafachuuf jecha reeffa qotanii baasuunsaanii gabaafame.
Namni Maartiin Shikuku Alukoyee jedhamu tokko jalaqaba baatii kanaarratti erga bishaaniin nyaatamee du&apos;een booda uffata dambii dargaggoota Kaawuntii Kaakaamegaa akkuma uffateetti awwaalan.
Maatiin namicha du&apos;e kanaa gochicha mormanilleen aanga&apos;oonni naannichaa garuu awwaala qotanii baasuun uffata dambii fudhataniiru.
Wasiilli namicha du&apos;ee Obbo Alukoyee akka jedhaniitti, &apos;&apos;aanga&apos;oonni seera biyyattiifi dudhaa maatii keenyaa diiganiiru,&apos;&apos; jechuun balaaleffataniiru.
&apos;&apos;Tibba awwalchi raawwatamutti qondaaltoonni bulchinsichaa hirmaataniiru. Isaanis, namtichi uffannaa dambii waliin akka awwalamuuf yaada dhiyaate hin mormiine ture,&apos;&apos; jechuun gaazeexaa Deyili neshinitti himaniiru wassilli isaa Firaansiis Mutaambaa.
Maatiin namichaas gaaffii qondaaltootaan uffannaa dabmii nama umuriinsaa 31 du&apos;ee kanaa deebisanii fudhachuuf dhiiyeessanii turan mormanii kan ture ta&apos;ulleen, osoo hayyama maatiis ta&apos;e kan mana murtii osoo hinqabaatiin awwaala qotuun uffannicha fudhatan jedhaniiru.
Qondaalli tokko gochiicha balaaleeffachuun, aanga&apos;oota awwaalchi akka qotamu taasisan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatu akka taasisan himaniiru.
"Erga reeffi tokkicha awaalamee booda qotanii baasuun hayyeema mana murtii ni barbaachisa. Aangaa&apos;onni naannichaa uffata dambii deebiifachuuf jecha garuu hojii seeraan alaa raawwataniiru,&apos;&apos; jedhaniiru aanga&apos;aan kun.
Jaarsooliin miseensa gosa namicha du&apos;ees gochi aanga&apos;oota kanneenii balaalleefachuun gochichis &apos;&apos;safuudha&apos;&apos; jedhaniiru.
&apos;Ekeeraan&apos; 41,000 mindaan kanfalamaafii ture galmeerraa haqaman
&apos;&apos;Haala aadaa keenyaatti namni bishaanii nyaatamee du&apos;a tokko awwaalamu kan qabu osoo aduun hinbahiin dura ta&apos;u waan qabaatuuf haaluma sanaan raawwannee ture.
Aanga&apos;oonni kunneen garuu uffannichaaf jecha reeffa qotanii baasaniiru,&apos;&apos; jechuu ture miseensoonni gosa kanaa gochicha kan balaaleefatan.
Aangaa&apos;oonnis erga uffannicha reeffarraa baafatanii booda jaarsooliin naannichaa maatii namichaa tasgabbeessuun uffata biraa haaraan akka awwaalamu taasisaniiru,&apos;&apos; jedhu Obbo Mutaambaan.